Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ
Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Ọnụ ụzọ ahụ bụ ngwama nke ihe dị iche iche, akụkụ ya na ụcha ya. Mpaghara nnabata ahụ bụ ohere nke nkasi obi iru ala. Usoro ihe egwu dị egwu na-ezute ihe ịchọ mma. N'azụ a dị a baraa na -akpata ebe izu ike. Omenala China nke ọdịnala Hui mere ka ọkụ na-agbakwụnye echiche nke ọdịnihu. Inggabiga ebe akwa nwere ụlọ mara mma nke ọma bụ ebe a na-eri nri. Ekebere ya na ifuru, ihe oyiyi azu azu, enyo enyo enyo enyo enyo na ihe ochie herbalist Bai Zi kabinet, ọ bụ njem nlegharị anya site n'oge na ihe odide ọdịnala na ejiji.
Ohere Storelọ ahịa Portugal Vineyards bụ ụlọ ahịa anụ ahụ mbụ maka ụlọ ọrụ ọkachamara na-ahụ maka mmanya n'ịntanetị. Ọ dị n'akụkụ isi ụlọ ọrụ ahụ, na-eche ihu n'okporo ụzọ ma na-ebi 90m2, ụlọ ahịa ahụ nwere atụmatụ mepere emepe enweghị nkebi. Ime ime bụ oghere na-acha ọcha na-enweghị ọhụụ na obere okirikiri nwere mgbasa okirikiri - kwaaji ọcha maka mmanya ndị Portuguese ịchapụta ma gosipụta ya. A na-adọwa shelves site na mgbidi na-ezo aka na ebe a na-a wineụ mmanya mmanya na 360m immersive ahụmahụ azụmaahịa na enweghị counter.
Mmekọrịta Mmadụ Na Ibe Ya
Mmekọrịta Mmadụ Na Ibe Ya Ahịrị na ahịrị ndị na-akwụrụ n’etiti na -eche ibe ha ihu. Grid ọ bụla bụ ebe eji ekwu okwu, nke bụkwa isi mmalite nke echiche imewe ihe ọcha. N'ihe banyere ichekwa ike na ichebe gburugburu ebe obibi, onye mere ya jiri oriọna na-echekwa ọkụ elektrik na gburugburu nchekwa. Iji mee ka ikuku dị mma na ụlọ mmanya, ihe osise ahụ na-etinye windo site na north ruo na ndịda, nke nwere ike ịhụ na ikuku nke eke.
Ụlọ Ngosi Ihe Ngosi
Ụlọ Ngosi Ihe Ngosi Site na ihe eji enyere obodo aka ichota ma dozie nguzozi, ihe ngosi obodo di n’ime uzo ato, site na mmepe obodo na mmepe iji kwalite ulo oru, obodo na echiche ndi mmadu banyere mgbanwe nke obodo na njiri mara obodo na obodo mepere emepe. ihu igwe mpịachi iji gosipụta mmebe nghọta nke a obodo, ịhụ obodo gara aga ka ịhụ ọdịnihu ya.
Ogige Equestrian Holistic architectural and spatial project image na-ejikọ ụlọ isii niile na-ekpughe njirimara ọrụ nke ọ bụla. Extended facade of arenas and stables directed to administrative composite core. Lọ nwere ihu isii dị ka okporo kristal na-adabere n'osisi osisi dị ka olu. Mgbidi triangles etubere ugo na mgbasa nke iko dị ka emerald nkọwa. Ihe owuwu ọcha na-acha ọcha na-eme ka ọnụ ụzọ mbata pụta ìhè. Grid facades bụkwa akụkụ nke oghere dị n'ime, ebe a na-ahụ gburugburu ebe obibi site na ntanetị. Ime dị iche iche na-aga n'ihu na-ekwu okwu banyere ihe owuwu osisi, na-eji ogo nke ihe eme ihe iji dozie ogo mmadụ.
Kafe Nke a obere na-ekpo ọkụ osisi obi na-adị cafe dị na akuku nke crossroad n'ime a jụụ obi. Mpaghara a na-emeghe nkwadebe na-eme ka ahụmịhe sara mbara nke arụmọrụ barista na ndị ọbịa ebe niile na oche mmanya ma ọ bụ oche tebụl na kafe. Ihe dị n’elu ụlọ a na - akpọ “Osisi Osisi Oche” na - ebido n’azụ mpaghara nkwadebe, ọ na - ekpuchi mpaghara ndị ahịa iji mee ikuku niile nke kafe a. Ọ na-enye ndị ọbịa ohere ọhụụ na-enweghị atụ ma bụrụkwa ihe na-ajụ ndị mmadụ chọrọ kọfị kọfị n'echeghị echiche.
Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Ohere Mmekọrịta Mmadụ Na Ibe Ya Ụlọ Ngosi Ihe Ngosi Ogige Equestrian Kafe